Wasiir Goodax oo markale u gafay Ardayda Soomaaliyeed * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Goodax oo markale u gafay Ardayda Soomaaliyeed
By Abdirisak M Tuuryare	 On May 14, 2019
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Xukuumada federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa markale u gafay Ardayda Soomaaliyeed ka dib markii uu sheegay dadkii maanta Wadooyinka ku banaanbaxayay in aysan aheyn Arday.
Wasiir Goodax ayaa sheegay in uu isku dayay in uu la hadlo qaar ka mid ah Ardaydii Banaanbaxa waday,laakiin ay kala hor yimaadeen dhagaxaan iyo dagaal, islamarkaana ay suurtoobi weysay in ay la hadlaan.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan dad aan aheyn Arday oo wadda rabshado lagu carqaladeynaayo Imtixaanka Guud ee dowladda Soomaaliya ee dib loo dhigay.
Hadalka Wasiirka ayaa yimid ka dib markii Wasaaradda waxbarashadda Soomaaliya ay si weyn ugu fashilantay imtixaankii socday maalmihii lasoo dhaafay ka dib markii ardayda badankood ay heleen qish.
Xisbiyo siyaasadeed oo ka hadlay sharciga doorashooyinka